24th September, 2021 Fri ०९:२२:२३ मा प्रकाशित
आज तैँले हराइस भोलि तँलाई म हराउँछु भन्ने इगो छ । पार्टीको लागि यो घातक हो ।
नेपाली काँग्रेसमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी छ । सभापति पनि व्यक्तिवादीमा रमाइरहुनभएको छ । आफु जितेर पार्टी हार्‍यो भने के मजा हुन्छ ?
क्रियाशिल सदस्य विवाद हल हुन नसक्दा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसको १४ औँ माहाधिवेशन अर्न्तगत तल्लो तहका अधिवेशन कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने भएको छ । भदौ १८ गतेबाट शुरु भएको वडा अधिवेशन दुई चरणमा गरी देशभर ६४ जिल्लामा सम्पन्न भए पनि १३ जिल्लामा विवाद अझै कायमै छ ।
चौँथो पटक भदौ २५ गते सार्वजनिक गरिएको अधिवेशन कार्यतालिका क्रियाशिल विवादकै कारण असोज ९ गतेको पालिका स्तरको अधिवेशनबाहेक अन्य तहको अधिवेशन दसैँपछि हुने भएको हो । बुधबार बसेको नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकले यसअघि वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकिएको पालिका स्तरको अधिवेशनबाहेक अन्य तहको अधिवेशन दसैँपछि गर्ने सहमति भएको हो ।
पटक पटक स्थगित हुँदै आएको नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन क्रियाशिल सदस्यता विवादकै कारण मंसिर ९–१३ गते हुनेमा काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रस्तुत छ, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालासँगको कुराकानीमा आधारित अर्न्तवार्ताको सम्पादीत अंश :
केही जिल्लामा विवादका बाबजुत देशभर ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
ढिलै भएपनि काँग्रेसभित्रको अधिवेशन भएकोले हामी उत्साही छौं । देशभर युवाहरूको उत्साहजनक उपस्थितिले राम्रो भएको छ ।
देशभर ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न हुँदासमेत अझै १३ जिल्लामा क्रियाशिल सदस्य विवाद कायमै छ, किन यस्तो भइरहेको छ ?
काँग्रेस पार्टीमा यो दुःखद पक्ष हो । पार्टी नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा चुनाव गराउनु भन्दा पनि पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसकै परिणाम हामीले भोगिरहेका छौं । गलत नेतृत्वका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ । राम्रालाई भन्दा पनि हाम्रालाई क्रियाशिल सदस्य वितरण गर्न खोज्दा विभिन्न जिल्लामा समस्या देखिएका छन् । त्यसको अन्त्यका लागि हामी निरन्तर संघर्षमा छौं ।
क्रियाशिल सदस्य विवादकै कारण बुधबार बसेको पदाधिकारीको बैठकले यसअघि निर्धारित गरेको पालिका, जिल्ला र प्रदेशस्तरको अधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ । यसले फेरि केन्द्रीय महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्दैन ?
नेपाली काँग्रेसका केही साथीहरू नेतृत्वमा छन् । महाधिवेशन आम निर्वाचनपछि गर्न खोजिएका छन् । उहाँहरू नै छानविन समितिमा हुनुहुन्छ । सभापति हुनुहुन्छ । १३ जिल्लाको विवाद अझै बाँकी छ । यसले नेपाली काँग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोजिएको हो ? अब गम्भीररुपमा सोच्नुपर्‍यो । यसलाई यति सजिलोसँग हामीले लिइराखेका छौं । पार्टीलाई उहाँहरूले गाह्रो र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याइसक्नुभएको छ । अब हामी चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैन । छिटो भन्दा छिटो १३ जिल्लाको क्रियाशिल सदस्यता विवाद हल गर्नुपर्‍यो । मिली सकेको भनेको छ किन अधिवेशन भए ? किन राति राति पठाइन्छ ? उत्साह त छ तर पार्टीलाई कब्जा गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्दा यस्तो समस्या आएको छ । कतै नेतृत्वकै कारण केन्द्रीय महाधिवेशन नै स्थगित हुने हो कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।
नेपाली काँग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीले यसरी विवादलाई तन्काउँदै लैजाने र पटक-पटक महाधिवेशन मिति स्थगित गर्दै जाँदा बाहिर राम्रो सन्देश जान्छ त ?
तपाईंले ठीक भन्नु भयो । पार्टी नेतृत्व जो जो यसमा सहभागी छन् । त्यसले जिम्मा लिनुपर्छ । हामी यसमा छैनौं । म केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो । क्रियाशिल छानविनमा हामी गएका पनि छैनौं । मलाई सरोकारको विषय पनि होइन । तर, नेतृत्व पंक्तिको गैह्रजिम्मेवारीपनले यस्तो भइराखेको छ ।
पार्टी नेतृत्वलाई समयमै झकझकाउन नसक्नु तपाईँहरूको पनि कमजोरी होला नि ? नेतृत्वलाई दोष दिएर आफु पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्छ ? तपाईँहरूले पनि अहिलेसम्म आफ्ना उम्मेदार छान्न त सक्नु भएको छैन ?
यसमा हाम्रो केही कमजोरी छैन । हामीले उम्मेद्वारी नै नदिउँ कि वा एउटा दिउँ कि वा १२ जनाको उम्मेद्वारी दिउँ त्यसले के फरक पर्छ र ? पार्टी नेतृत्वले जिल्ला जिल्लामा क्रियाशिल पठाउनु पर्‍यो नि । त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि । नेपाली काँग्रेसको ७५ वर्षको इतिहासमा पार्टी सभापतिले आफ्नै जिल्लामा प्रहरी प्रशासन लगाएर अधिवेशन गराउन खोज्नुभयो । जसमा जिल्लाका सभापतिलगायत अन्यले भाग लिएनन् । यस्तो भइरहेको छ । तबपनि हामी डडेल्धुराको विषयमा चुप लागेर बसेका छैनौं । तर, उहाँ नाङ्गो नाच नाच्दै हुनुहुन्छ । किन आफ्नै जिल्लामा पुलिस प्रशासन लगाउनुभयो ? जुन पार्टी अनवरतरुपमा लोकतन्त्रका लागि लडेको छ उसैले पार्टीको अधिवेशनमा राज्य प्रशासनको दुरुपयोग गर्ने ? यसले के देखाउँछ भने नेपाली काँग्रेसमा पनि निरङ्कुशता हाबी भयो । त्यसका लागि पनि हामी लडिरहेका छौं ।
यस अघि अधिवशेन भएको जिल्लामा बाहेक पालिका, प्रदेश र जिल्लास्तरको अधिवेशन कार्यतालिका परिवर्तन हुने पक्का जस्तै छ । यसले केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुने देखियो नि त ?
पार्टी नेतृत्व अहिले पनि महाधिवेशन गराउने पक्षमा फिटिक्कै छैन । उसको सोच, योजना पार्टी कब्जा गर्नेमै छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण डडेल्धुरालाई लिन सकिन्छ । त्यहि कारणले १३ वटा जिल्लाको क्रियाशिल विवाद कायमै छ ।
अहिलेको नेतृत्वबाट पार्टी र मुलुकको हित सम्भव छ ?
सम्भव हुनैपर्छ । असम्भव छ भनेर नेतृत्वलाई अहिल्यै नै हटाउने कुरा आउँदैन । जे छ त्यसैमा मिलेर जानुपर्छ । अहिले पनि सम्भव/असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।
पार्टी संस्थापन इतरका शक्तिहरू कमजोर भएर पार्टी सभापति बलिया देखिएको हो कि वा तपाईहरूलाई पेलेरै जाने हिसाबले सभापतिले गोटी चाल्दै हुनुहुन्छ ?
सुन्नुनोस, यो हामी कमजोर र बलियोको कुरा होइन । यहाँ संस्थापन पक्ष बलियो र इतरका कमजोर भन्ने कुरा पनि होइन । यहाँ नेपाली काँग्रेस नै कमजोर भइसक्यो । यो गम्भिर विषय हो । हाम्रो चिन्ता यहाँ हो ।
संस्थापनइतर पक्षबाट सभापतिमा तपाईँको पनि चर्चा छ । अन्य नेताहरूले पनि दाबी छाडेका छैनन् । सभापतिको उम्मेद्वारमा तपाईँ नै उठ्नु हुन्छ कि अन्यलाई सघाउनुहुन्छ ?
यसमा म नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । सभापतिका लागि म अयोग्य पनि होइन । यसमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे साथीहरूबीच सरसल्लाह भइरहेको छ । को उम्मेद्वार बन्ने भन्दा पनि अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन मलाई शंका लागिसक्यो । म मात्रै होइन । अन्यले पनि दाबी गरिरहेका छन् । यसमा हामी मिलेर अघि बढ्छौं ।
यसको मतलब तपाईँहरू साझा उम्मेद्वारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
एउटा हुन्छ कि ६ वटा हुन्छ तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ ? यो नेपाली काँग्रेसभित्रको चुनाव हो । कसलाई पठाउने वा नपठाउने भन्ने कुरा हाम्रो सरोकारको विषय हो ।
तपाईँहरू एक ढिक्का भएर जाँदा नेतृत्व परिवर्तन गर्न सजिलो होला नि त ?
गाह्रो वा सजिलोको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । चार जना भए पनि उठ्नु हुन्छ । यो काँग्रेस पार्टीभित्रको अधिवेशन हो । के फरक पर्छ र ? किन चिन्ता गर्ने हामीले ? नेतृत्वले किन पार्टी कब्जा गर्न खोजिरहेको छ ? त्यो पो महत्वपूर्ण कुरा हो त । डरलाग्दो कुरा यो हो नि । किन आफ्नै जिल्लामा पुलिस प्रशासन लगाउँदछन् ? लोकतान्त्रिक पद्धतिले कसैले पनि जित्छ भने त्यो स्वाभाविक हो । हाम्रो चिन्ता पार्टी कब्जा गर्दा नेपाली काँग्रेलाई कहाँ पुर्‍याउँछ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो नि । हामीलाई चिन्ता त्यहाँ छ ।
अहिले देशभर वडा अधिवेशनको परिणाम हेर्दा क्षेत्रीय, केन्द्रीय स्तरका प्रभावशाली धेरै नेताहरू समेत वडामै पराजित भएको अवस्था छ । यसले नेपाली काँग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको सन्देश दिएको हो ?
नेपाली काँग्रेस सँधै नयाँ र पुराना नेताहरूको समिश्रणले बनेको पार्टी हो । केही साथीहरू जो पार्टीभित्र क्रियाशिल हुनुहुन्थ्यो ती साथीहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउनसक्नु भएन त्यो दुःखद कुरा हो । तर, धेरै ठाउँमा वडा वडामा नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । केही वडामा ८–१० जना साथीहरू छन्, उनीहरू आउन सक्नुभएन त्यसमा मलाई पनि दुःख लागेको छ । यसमा दुईटा कारण छन् । एक उम्मेद्वार आफ्नै कारणले पनि हारेको हुनसक्छ । अर्को नेपाली काँग्रेसभित्र एउटा प्रवृत्ति बढिराखेको देखिन्छ । त्यो के हो भने आज तैँले हराइस भोलि तँलाई म हराउँछु भन्ने इगो छ । पार्टीको लागि यो घातक हो । नेपाली काँग्रेस एउटा मासबेस पार्टी हो । मासबेस पार्टीमा सबैको योगदान छ । तिनिहरूलाई पनि हामीले समेट्नु पर्ने हुन्छ । जो युवाहरू पनि छन्, तिनिहरूलाई पनि समेट्नु पर्ने हुन्छ । यी दुवै पक्षलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौं भने राम्रो हुन्छ ।
तपाईँले अन्तरघातको थोरै कुरा उठाउनु भयो । यसै वर्ष स्थानीय र संघीय चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा आएको छ । कतै पार्टीभित्रको अन्तरघात आगामी चुनावमा देखिने त होइन भन्ने धेरैको चिन्ता छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
हाम्रो पार्टी मासवेश पार्टी भएको हुनाले त्यो चिन्ता स्वभाविक हो । स्वभाविक हुँदा हुँदै पनि अधिवेशन त हुनुपर्‍यो । मेरो इच्छा मंसिरभित्र जसरी पनि महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्नेमा छ । त्यसमा अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाउनु भएन । राज्य प्रशासनको दुरुपयोग हुनुभएन । जसरी पनि अधिवेशन सम्पन्न हुनु जरुरी छ । धाँधलिरहित अधिवेशन भए केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीमा नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना प्रवल छ । काँग्रेसको नयाँ नेतृत्वले नै आगामी निर्वाचनमा नेतृत्व लिन्छ । पार्टीको आन्तरिक हारजितलाई लिएर आम निर्वाचनमा रिस फेर्नु कांग्रेस र मुलुककै लागि घातक हुन्छ । त्यो दिशामा कोही पनि जानुहुँदैन ।
अन्त्यमा, अहिले सभापति देउवालाई पार्टी मात्र नभइ देशकै नेतृत्व लिने अवसर आएको छ । तर, तपाईँहरूकै आरोपलाई आधार मान्दा उहाँले पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरी पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागे भन्ने छ । व्यक्तिले जित्ने र पार्टीले हार्दा उहाँलाई के फाइदा छ ?
नेपाली काँग्रेसमा व्यक्तिवादी चरित्र हाबी छ । सभापति पनि व्यक्तिवादीमा रमाइरहुनभएको छ । आफु जितेर पार्टी हार्‍यो भने के मजा हुन्छ ? सबैको जित भयो भने सबैलाई राम्रो हुन्छ । यो त पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो नि । त्यसमा हारजित हुन्छ । कोही चुनावबाट आउँछन् । कोही सहमतिबाट आउँछन् । हामी सबैको लक्ष्य भनेको स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावलाई सफल पार्ने हो । त्यसमा हामी चुक्यौं भने मुलुकमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछ । यो हेक्का पार्टी सभापतिलाई छ कि छैन गम्भीर विषय हो ।